Waare oo wali sii wada xilka-qaadis xili HirShabeelle caqabado wajahayso | Keydmedia
Waare oo wali sii wada xilka-qaadis xili HirShabeelle caqabado wajahayso
HirShabeelle ayaa doorasho cusub galaysa dhamaadka sanadkan 2020, iyadoo aysan xalin dhibaatadeeda, waxaana lagu eedeeyaa Waare xil-gudasho la’aan iyo musuq-maasuq.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa salka u dhigi waayay HirShabeelle oo horumar ka sameyn tan iyo aas-aaskeedii 2016 dhinacyada siyaasadda, amniga iyo baahinta maamulkan fadhiidka ku noqday magaaladda Jowhar.
Todobaad gudihiisa wuxuu xilka qaadis ku sameeyay dhowr Mas’uul oo ay kamid yihiin Wasiirro iyo Duqii Beledweyne, oo shaqada uu ka eryay iyadoo wax yar xafiiska joogtay.
Wareegto ku taariikhaysan 1-da August 2020, ayuu Waare ku shaaciyay inuu xilalkii ka qaadey Wasiirkiisii Biyaha iyo Tamarta Saalax Xasan iyo Wasiiru-Dowlaha Beeraha.
Waare oo la doortey Sep, 2017 ayaa mudadii ku dhawaadka 3-da sano ee uu xilka hayay ku guuleysan waayay inuu sugo amniga jidka u dhaxeeya Jowhar iyo Balcad, oo mas’uuliyiin iyo Xildhibaano Al-Shabaab ku dishay.
Madaxda Maamulka waxay diyaarad ugu safraan Muqdisho iyo Jowhar oo 90-KM isku jira, waxaana xusid mudan in degmooyinka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe aan la isagu kala gudbi karin, sababo amni la'aan kadib markii Al-Shabaab go'doomisay.
HirShabeelle ayaa doorasho cusub galaysa dhamaadka sanadkan 2020, iyadoo aysan xalin dhibaatooyinkeeda, waxaana lagu eedeeyaa Waare xil-gudasho la’aan iyo musuq-maasuq.
Marka loo bar-bardhigo Maamullada kale, HirShabeelle waa Maamulka ugu liita xilligan, taasoo loo sababaynayo hogaankeeda oo aan wanaagsanayn iyo kala qeybsanaanta beelaha.
0 Comments Topics: al shabaab hiiraan hirshabeelle waare
Warar 9 September 2020 18:10
Wasiir la sheegay inuu la shaqeeyo Shabaab oo Muqdisho lagu xiray
Warar 3 September 2020 14:40